सर्वश्रेष्ठ Minecraft छाला विचार र सुझावहरू (२०२०) - गेमि।
सर्वश्रेष्ठ Minecraft छाला विचार र सुझावहरू (२०२०)
Minecraft एक भारी खेलाडी निर्मित विश्व रहन्छ जुन तपाईंलाई लगभग केहि पनि निर्माणको सजिलो बनाउँदछ। तपाईंसँग कुनै पनि चीज अनुकूलित गर्न विकल्पहरू छन्, जुन तपाईंको वर्णको छाला समावेश गर्दछ। यो प्रक्रिया पूरा गर्न तपाईका लागि धेरै विधिहरू छन्।
तपाईं अनगिन्ती शानदार कलाकारहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ जुन Minecraft छाला प्रदान गर्दछ। वैकल्पिक रूपमा, त्यहाँ अनगिनत अनुप्रयोगहरू र सफ्टवेयर छन् जसले तपाईंलाई Minecraft मा प्रयोग गर्न कस्टम छाला सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ।
किन Minecraft छाला प्रयोग?
Minecraft स्किन खेल को संभावनाहरु अन्वेषण एक रचनात्मक तरीका हो। यसले तपाईंलाई केहि 'नयाँ' वा 'ताजा' को भावना ल्याउँछ, र तपाईं अधिक इमर्सिभ अनुभव प्राप्त गर्नुहुन्छ। यदि तपाईंले केहि प्राप्त गर्नुभयो जुन तपाईंको प्राथमिकतासँग मेल खान्छ, यो उल्लेखनीय छ।
धेरै व्यक्तिहरूले Minecraft छालाहरू मन पराउँछन् किनकि उनीहरूसँग चरित्रलाई उनीहरू जस्तो देखिने बनाउन विकल्प छ। व्यक्तिहरू यी मनमोहक पात्रहरूको रूपमा बिभिन्न मिडिया र रोलप्लेबाट उनीहरूको मनपर्ने पात्रहरू जस्तो देखिन्छन्। त्यहाँ धेरै कारणहरू हुन सक्छन्।
Minecraft छाला विचार:
सबैजना स्वाभाविक काल्पनिक वा रचनात्मक हुँदैनन्। तपाईं त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले सोच्नुहुन्छ कि त्यहाँ धेरै धेरै Minecraft स्किनहरू बाहिर छन्। तपाई खाली ठाउँहरूमा चल्दै हुनुहुन्छ वा सिर्जनात्मकता ब्लक। तपाईले सोच्न सक्नुहुन्छ कि तपाईले चाहानु भएको छाला पहिले नै त्यहाँ अवस्थित छ। यद्यपि त्यो विन्दु होइन। पोइन्टले तपाईंलाई उत्तम उत्तम निजीकरण सम्भवको साथ तपाईंको खेलको आनन्द लिनको लागि हो।
यहाँ केहि विचारहरू छन् जुन तपाइँको सृजनात्मक रसलाई उत्तेजित गर्न सक्दछ:
१ मिडिया प्रेरित
के तपाइँसँग मनपर्ने टिभि कार्यक्रम वा चलचित्र छ? त्यसोभए तपाईं आफ्नो मनपर्ने चरित्रलाई कसरी प्रयास गर्नुहुन्छ? तपाईंसँग Minecraft मा धेरै विकल्पहरू छन् कि या त चरित्र फेला पार्न वा सिर्जना गर्न। यदि तपाईंसँग अन्य भिडियो गेमहरू छन् भने एनिमेसहरू पनि, केहि कलाकारहरूले लगातार तपाईंलाई Minecraft को लागी सबै भन्दा राम्रो चरित्र छाला प्रदान गर्दछ।
यसैले, यो उपलब्ध एक सजिलो र फराकिलो कोटीहरू हो। तपाईं लगभग कुनै पनि चरित्र प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। के तपाई एनिमेम Minecraft छाला खोज्दै हुनुहुन्छ? सायद गेम अफ थ्रोन्सबाट केहि यथार्थपरक हुन सक्छ? कुरा यो हो, तपाईंले निश्चित रूपमा यी छालाहरू भेट्टाउनुहुनेछ। लोकप्रिय छाला कहिल्यै बाहिर जान्छ।
यदि केहि छैन भने, तपाईं जहिले पनि तपाईंको सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ।
२. सुपरहीरो र खलनायक
सबैले एक सुपर हीरो वा एक सुपरिवेलिनको बारेमा कल्पना गर्छन्! तपाईं वास्तविक दुनियामा पोशाक र वरिपरि घुम्न सक्षम नहुन सक्नुहुनेछ, तर तपाईं Minecraft मा तपाईंको क्यारेक्टरहरू धेरै अनुकूलित गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईं डार्क नाइट वा स्टिलको म्यान प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। हुनसक्छ तपाई कमिकहरुबाट केहि चाहानुहुन्छ। कुरा यो हो, सुपरहीरोहरू सधैं शैलीमा हुने गर्दछन्।
Ab. सार एजेन्सी
सायद तपाईं बाहिर खडा र पूरै फरक चरित्र जस्तै हेर्न चाहनुहुन्छ। अमूर्त निकायहरू छाला र आँखाका साथ रंगहरूको मिश्रण हो। तपाईंको चरित्र कसरी देख्न सकिन्छ तपाईंसँग सीमा छैन। तसर्थ, तपाईं यसलाई त्यसो गर्न सक्नुहुनेछ कि तपाईंको चरित्रको सेतो आँखा र पूर्णतया कालो शरीर छ।
तपाईं आफ्नो रंगको लागि वरपर नीन र colors र छायाँको साथ प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। केही व्यक्तिले वर्णहरू सिर्जना गरेका छन् जुन र colors्गका ब्लाकहरू जस्तै इन्द्रेणीहरू जस्तै देखिन्छन्। तपाईं यस Minecraft छाला विचार संग पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
Su. सूट सजिलो छ
कालो, सेतो, चाँदी, खरानी, ​​रातो हुनसक्छ यो सूट त्यति सजिलो छैन, तर तपाईं सजीलै शेड गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं रंगहरूको 'गहनता' लिन चाहनुहुन्न भने, तपाईं आफ्नो चरित्रको सूट सबै कालो रंगाउन सक्नुहुन्छ र अझै पनि यसलाई आकर्षक लाग्दछ।
सूट कहिले पनि शैलीको बाहिर जान सक्दैन, यो वास्तविक जीवनमा होस् वा खेलमा। जे होस्, यदि तपाईं प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ भने, त्यहाँ लामो कोटहरू, ज्याकेट, फेडोरा, र अधिक धेरै तपाईं आफ्नो चरित्रमा थप्न सक्नुहुन्छ। त्यो सहि छ! तपाईंको चरित्रको लागि सूट प्राप्त गर्नुहोस् र हेर्नुहोस् तपाईंको चरित्र कति राम्रो देखिनेछ!
Go. एक सानो आरामदायक जानुहोस्
यो प्रक्रिया हो कि तपाईलाई छायांकन र धेरै धेरै र colorsहरूसँग काम गर्न आवश्यक पर्दछ। यो कुन प्रकारको 'अनौपचारिक कपडा' मा निर्भर गर्दछ तपाईंले आफ्नो चरित्रमा निर्णय गर्नुभयो। थोरै क्याजुअल शैली प्राप्त गर्न सजिलो छैन, तर यदि तपाईं यसलाई कार्य गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईं बाहिर उभिनुहुनेछ। तपाइँको चरित्रको छाला डिजाइन गर्न मद्दतको लागि तल दिइएका सुझावहरू छन्, जसले मद्दत गर्न सक्छ।
कसरी Minecraft छाला विचार उत्पादन गर्न?
धेरै व्यक्तिहरू उनीहरूको Minecraft छाला सिर्जना गर्न निराश हुन्छन्। यदि तपाईं आफ्नो मनपर्ने छाला बनाउनको लागि कलाकार हुनुपर्छ भन्ने सोच्नुहुन्छ भने, तपाईं गलत हुनुहुन्छ! यहाँ Minecraft छालाको राम्रो प्राप्त गर्न मद्दतको लागि उपयोगी सल्लाहहरूको साथ द्रुत गाईड छ!
चरित्र नक्शा बुझ्नुहोस्:
जबकि Minecraft एक उपयोगकर्ता मैत्री प्लेटफर्म हो, यो एक चरित्र नक्शा बुझ्न कठिन हुन सक्छ। यो साधारण खुट्टा, टाउको, आँखा, र के छैन। यसको सट्टामा, तपाइँ 'प्याकेज' बक्सको रूपमा राखिएको चरित्र जस्तो केहि पाउनुहुनेछ। यसको बारे जस्तै कार्डबोर्ड बक्सहरूमा सोच्नुहोस् जुन तपाईं टेक उपकरणहरू पाउनुहुन्छ र के छैन।
यी प्याकेजहरू विभिन्न फ्ल्यापहरू खोल्न। त्यस्तै, एक Minecraft चरित्र नक्शा वर्ण को प्रत्येक भाग को लागी विभिन्न वर्ग र flaps छ। पोइन्टन्ट भनेको क्यारेक्टर डिजाईन गर्न सजिलो बनाउनुका साथै यो सँगै आउँछ। तपाईं जहिले पनि पूर्वावलोकन जाँच्न सक्नुहुन्छ, तर यो केवल 'दृश्य-मैत्री' मात्र होईन जो कलाकारहरू छैनन्।
केहि संस्करणहरूमा उपयोगकर्ता-अनुकूल चरित्र नक्शा छ। अरूसँग तपाईसँग रंग बनाउन धेरै नै जटिल शैली हुन सक्छ। जेसुकै होस्, एकचोटि अभ्यास गर्नुभएपछि यो सहजै हुनेछ। तिनीहरू सबै ट्यागको साथ आउँदछन्, त्यसैले यो एक प्लस हो।
तपाइँ जहिले पनि अनुकूलित गर्न सक्नुहुन्छ:
वर्षौंको उत्कृष्टता र लाखौं खेलाडीहरूसँग, Minecraft सँग स्किन्सको सब भन्दा व्यापक संग्रह छ। यद्यपि यो अझै सम्भव छ कि तपाईले खोज्नु भएको कुरा तपाईले फेला पार्न सक्नुहुन्न। उदाहरण को लागी, तपाईले छाला पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ कि राम्रो देखिन्छ तर र hasहरू छन् जुन तपाईंको प्राथमिकतासँग मेल खाँदैन।
Minecraft को बारे मा सबै भन्दा राम्रो पक्ष हो कि तपाईं सँधै यी छाला अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ। अनुकूलनको साथ खेल्नु र छालाको लागि बिभिन्न र orहरू वा शेडहरू प्रयोग गर्नु खालको सिर्जना गर्ने उत्तम तरिका हो। यसले तपाईंलाई सुरू गर्न बेसलाइन प्रदान गर्दछ, र त्यसपछि तपाईं अभ्यासको रूपमा जान सक्नुहुन्छ तपाईं जानुहुन्छ।
तपाइँ प्रत्येक अंशको राम्रो ज्ञान प्राप्त गर्नुहुनेछ, यदि यो चरित्र नक्शा बुझ्नका लागि भौंरा भइरहेको छ भने पनि।
शेडिंग सुझावहरू र विचारहरू:
यो छालाबाट सुरू गर्नु राम्रो हो जुन र colored्गीन छैन। यसले तपाईंलाई तपाईंको सुविधाको आधारमा छायाँको अनुमति दिन्छ।
कपालका लागि विकर्ण शेड्स प्रयोग नगर्नुहोस्। यो अझै पिक्सल र ब्लक-जस्तो चरित्र हो, त्यसैले तपाईंले ठाडो छायांकनको लागि लक्ष्य राख्नु पर्छ। यदि तपाईं र color र रंग थप्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईं भित्र र colorsहरू थप्न सक्नुहुनेछ जस्तो तपाईंलाई ब्लकको रूपरेखा पछि मनपर्दछ। यो एक राम्रो बनावट प्रदान गर्दछ।
शरीर वा कपडाका लागि शरीरको सबैभन्दा कालो भागहरू छायांकन सुरु गर्नुहोस्। त्यो चरित्रको शीर्ष, बीच र तल हो। एकचोटि तपाईंले त्यसो गरिसकेपछि, तपाईं यसको वरिपरि तेर्सो र ठाडो ब्लकहरूलाई रंगमा रंगाउन सक्नुहुनेछ जुन गाढा रंगको भन्दा छायाको हल्का हुन्छ। यसले तपाईंको लागि राम्रो र .्गीन अनुभव ल्याउँछ।
खुट्टा वा प्यान्ट को लागी माथिको बीचको भाग सबैभन्दा गाढा मानिन्छ र त्यसपछि हल्का हुन बाहिरी तर्फ विस्तार गर्दछ। यो तपाईको लागि उत्तम तरीका हो तपाईको Minecraft को र color्ग गर्न र छायाँ बनाउनको लागि अत्यन्तै सहजताका साथ। तपाईं आफ्नो रचनात्मकता अनुसार जुत्तासँग प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
अब तपाईंसँग धेरै उत्तम र सबैभन्दा रचनात्मक विचारहरू छन् जुनसँग धेरै प्रयोग गर्नु भएको छ। थप रूपमा, तपाइँसँग काम गर्ने र तपाइँको Minecraft छाला सिर्जना गर्न सुझावहरू छन्। यदि तपाईं निश्चित हुनुहुन्न भने, तपाईं जहिले पनि अनलाइन डाउनलोड गर्न सबै भन्दा राम्रो Minecraft छाला र विचारहरूको खोजी गर्न सक्नुहुन्छ!
Minecraft रिमोटकनेक्ट त्रुटि फिक्स गर्नुहोस्
अनब्लक गरिएका खेल ट्या tank्क समस्या १
एमपी3कन्भर्टर एन्ड्रोइडमा उत्तम यूट्यूब
पुटलोकर तपाईं नै हुनुहुन्छ
नि: शुल्क PSN कोड सूची प्रयोग नगरिएको
फोनमा फोनमा फिल्म डाउनलोड गर्नुहोस्
टिभी कार्यक्रमहरू हेर्न उत्तम वेबसाइटहरू
निःशुल्क लुक्स कोड दिसंबर २०१ 2019